ILBC Preschool Remote Learning Programme - ILBC | IGCSE & A LEVEL SCHOOL
ILBC ၏ “Preschool Remote Learning Programme” သည်
(၁) ကလေးငယ်များအတွက် အသက်အရွယ်အလိုက် သင်ယူလေ့ကျင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော စွမ်းရည်များ မမေ့ပျောက်သွားစေရန်၊
(၂) အသက်အရွယ်အလိုက် သင်ယူလေ့ကျင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော စွမ်းရည်များ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ရန်၊
(၃) အသက် (၅)နှစ်ပြည့်၍ Kindergarten သို့တက်ရောက်သည့်အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အသက် (၃)နှစ်မှစတင် တက်ရောက်နိုင်ပြီး အတန်းစဥ်ကို Junior Level (အသက် ၃နှစ်မှ ၄နှစ်)
Senior Level (အသက် ၄နှစ်မှ ၅နှစ်) ဟူ၍ သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။
Remote Learning Programme တွင် တက်ရောက်သင်ကြားမှုပြုရာတွင် Placement Test ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။ Campus ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှသာ ဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ILBC မှဖွင့်လှစ်သည့် “Remote Learning Programme” သည် ကလေးငယ်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းအတွက် ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဘာသာစကား ပြောဆိုနိုင်မှုနှင့် သိမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှုတို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါသည်။
မြန်မာစာ (သို့မဟုတ်) တရုတ်ဘာသာစကား
Live Streaming အနေဖြင့် (Music, Storytelling, Zumba, Seasonal activities)
STEAM အခြေပြု Activities တို့ကိုအခြေခံကနေစပြီး နားလည်တတ်မြောက်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။
Remote Learning Programme အတွက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
ကလေးငယ်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်ကို တိုးမြင့်စေဖို့အတွက် Handouts, Hand On Activities တွေကို လစဥ်ပေးပို့ပြီး လေ့ကျင့်စေပါသည်။ Acitivities အားလုံးသည် ကလေးငယ်များ၏အသက်အရွယ်အလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလိုက် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် အထူးပြင်ဆင်ပေးထားပါသည်။ (ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ်တတ်စေရန်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။)
Learning Kits များဖြင့် သင်ကြားမှုပြုရာတွင် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ တွေးခေါ်နိုင်ခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်ခြင်း၊ မျက်စိနှင့် လက် အချိတ်အဆက်မိမိဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ကစေခိုင်းသည့်အတိုင်း လက်က တလွဲမသွေလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် မလွဲမသေ မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သော စွမ်းရည် စသည်တို့ တိုးတက်စေပါသည်။
ILBC Remote Learning Programme တွင် ဆရာ/မများ၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူများနှင့် ကျောင်းသူ/သားလေးများသည် Microsoft Teams Platform တွင် မိနစ် (၃၀)ကြာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး လေ့ကျင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ILBC Remote Learning Programme တွင် တက်ရောက်လိုသော ကလေးတစ်ဦးအတွက် တစ်လလျှင် 100,000 ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် Register ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Registration Link: http://bit.ly/ILBC_Preschool_Reg_Form
The ILBC Preschool Remote Learning Programme is launched with the aim for children to be in touch with their skills that they have learned and developed, to continue developing skills and to be ready when they attend Kindergarten as they reach the age of 5.
Children of3years can start attending the programme and there are two set levels Junior Level (For age 3-4) & Senior Level (For age 4-5). There’s no placement test for Remote Learning Programme. They need to take placement tests only when the physical campus reopen.
The ILBC Preschool Remote Learning Programme helps each and every children on these developmental areas; Physical, Social, Emotional, Language and Cognitive.
The students can learn
Myanmar Language (or) Chinese Language,
Live Streaming (Music, Storytelling, Zumba, Seasonal activities),
STEAM based activities.
(Materials for Remote Learning Programme)
Learning kits – Handouts and hand on activities are provided monthly to stimulate their skills. All the activities are age appropriate and kids friendly (easy – to – handle materials and easy – to – follow instructions)
Skills developed through learning kits – Problem solving, logical thinking, creativity, imaginative skill, hand-eye coordination, brain – hand coordination and self- help skills.
30 minutes online meeting with Parents, students and teachers where they can discuss and practice through Microsoft Team learning platform.
Fees: 100000 per month.
« Congratulations Technology Integrated Learning (TIL)
ILBC Technology Based Learning (TBL) – Weekend English Proficiency Course »